Home » Isekọ akụkọ njem » CDC na-ekwupụta ntuziaka maka akwụkwọ ikike ụgbọ mmiri
Taa, forlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) wepụtara nduzi maka ụgbọ mmiri iji mee njem njem dị iche iche na ndị njem afọ ofufo dịka akụkụ nke ngwa COVID-19 Condition Sailing Certificate.
Ihe ntinye akwukwo nke COVID-19 nke onodu bu uzo ikpeazu tupu njem ndi njem amachibidoro.
Ndị na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri nwere ihe niile achọrọ na aro dị mkpa iji bido njem ndị echepụtara tupu ịmaliteghachi njem ụgbọ mmiri amachibidoro.
CDC ga-aga n'ihu na-emelite ntụzịaka ya na ntụnye ya iji kọwaa ụkpụrụ nchekwa dị mkpa yana mmemme ahụike ọha na eze.
Site na iwepụta akwụkwọ ndị a, ndị na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri ugbu a nwere ihe niile dị mkpa na aro ha kwesịrị ịmalite njem ndị a gbanwere tupu ịmaliteghachi njem ụgbọ mmiri amachibidoro. Tụkwasị na nke a, mwepụta a gụnyere ngwa COVID-19 Condition Sailing Certificate, nke bụ usoro ikpeazụ tupu amachibidoro njem ndị njem.
CDC weputara CSO na October 2020 iji gbochie mgbasawanye nke COVID-19 na ụgbọ mmiri, site n'ụgbọ mmiri gaa n'obodo, yana iji kpuchido ahụike na nchekwa ọha. Iwu ahụ gosipụtara usoro a ga - amalite iji maliteghachi njem ndị njem iji belata ihe ize ndụ nke ịgbasa COVID-19 n'ụgbọ.